तपाईं एक परिवार छुट्टी चाँडै योजना छ? र तपाईँले निर्णय गर्न सक्दैन जहाँ यो मनाउन? "नोबल नेस्ट" (Korolev) - त्यसपछि सुन्दर होटल र रेस्टुरेन्ट, उपनगरहरुमा स्थित, ध्यान। कोठा, वरपरको क्षेत्र को फोटो, भोज हल तल प्रस्तुत गरिनेछ।
राजा - होटल र युरोपेली वर्ग "नोबल नेस्ट" को रेस्टुरेन्ट संग देश जटिल घरहरुमा जो शहर। यो मास्को नजिकै एक आरामदायक गाउँमा स्थित छ, मास्को रिङ रोड मात्र सात किलोमिटर। यो जटिल एक सुरम्य पार्क क्षेत्रमा उत्कृष्ट देखिन्छ र यसको प्राकृतिक परिदृश्य संग अतिथि enchants। को 4th तल्ला मा होटल निर्माण रूसी वास्तुकला को कला नोव्यू तत्व संग आधुनिक शैली जोडती। दोस्रो तल्ला मा त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, प्रस्तुति र सम्मेलन, बार लागि हल जडित जाडो बगैचा छ। यो सम्मेलन हल सबै आवश्यक आधुनिक भिडियो उपकरण र प्रोजेक्टर परिवर्तनीय छ। नयाँ प्रविधिको उपस्थिति रूसी आचरण को शैली मा डिजाइन वातावरण, बिगार्छ छैन। होटल यसको आफ्नै संग सुसज्जित छ बिजुली आपूर्ति प्रणाली, त्यसैले होटल जटिल काम शक्ति आपूर्ति स्वतन्त्र छ। पानी विशेष उपचार undergoes र पूर्णतया युरोपेली स्तर अनुपालन त, खनिज संग संतृप्त छ भनेर "नोबल नेस्ट" को क्षेत्र मा यसको आफ्नै तरिकाले, छ। मा त वर्ष को कुनै पनि समय होटल कोठामा एक तापमान नियन्त्रण समर्थित भवन प्रवेश हावा, हावा-कंडीशनिंग सिस्टम मार्फत बित्दै।
होटल "नोबल नेस्ट" (Korolev) आफ्नो ग्राहकहरु 14 आरामदायक कोठा, फर्श 2-4, लगायत स्थित प्रस्ताव: एक-कोठा - 8; दुई-बेडरूम -6तपाईं (4 कुल) एक द्वैध अपार्टमेन्ट मा सार्न सक्नुहुन्छ; सबै आफ्नो फर्नीचर उपलब्ध, इटाली बनेको छ काठ को गरे। प्रत्येक होटल कोठा संग इन्टरनेट पहुँच, इलेक्ट्रोनिक Safes Elsafe (नर्वे) र नियन्त्रण तापमान र चिस्यान टिभि-कम्प्युटर सिस्टम छ। विशेष रंग र मूल डिजाइन - यहाँ तपाईं बारम्बार कोठा, मुख्य फरक देख्न हुनेछ।
होटल जटिल को क्षेत्र मा 150 वर्ग मीटर को पनि6तीन-स्तर लक्जरी विला समायोजित गर्न तयार छन्। जमीन तल्ला मा एक प्रवेश हल, रहन कोठा र बाथरूम, दोस्रो मा छ - एउटा बेडरूम खुला veranda र शौचालय; तेस्रो - अर्को बेडरूम र एक शौचालय एक बाथरूम।
Wealthier ग्राहकहरु 300 वर्ग मीटर को वीआईपी-घरेलु क्षेत्रमा समायोजित गर्न सकिन्छ। एक बिलियर्ड कोठा, एक मनोरम छत, तेस्रो - - एक बेडरूम र शौचालय एक बाथरूम पहिलो तल्ला द्वारा एक चिसो पूल र एक बाथरूम, एक फिटनेस कोठा र एक विश्राम कोठा, दोस्रो संग रूसी बाफ कोठा कब्जा गरिएको छ।
यो घरेलु छोटो र लामो अवधि लागि भाडामा गर्न सकिन्छ।
अतिथिहरूको सुनौलो रिङ भ्रमण मा जाने, वा मुख्य होटल जटिल "नोबल नेस्ट" बाट अलग स्थित रेस्टुरेन्ट, भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। Korolev - को मास्को क्षेत्र मा सबै भन्दा ठूलो अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्र - त्यसैले Muscovites को महानगरबारे को bustle देखि आराम गर्न यहाँ आएको, एक ecologically सफा क्षेत्र मा स्थित छ। होटल को अन्य आकर्षण बीच एक पूल, जिम र सना आवंटित गर्न सम्भव छ। यहाँ तपाईँले मेहनत देखि आराम गर्न सक्छन् ठूलो वातावरण आनन्द र शुद्ध प्रकृति आनन्द।
होटल 200 मान्छे को लागि एक भोज हल र 150 व्यक्ति लागि पोखरी मा एक गर्मी छत छ। होटल कम्प्लेक्स "नोबल नेस्ट" - आयोजना विवाह, कर्पोरेट घटनाहरु, वार्षिकोत्सव र शो को लागि एक महान ठाउँ। पाठ्यक्रम, गरे जन्मदिनको केक, आदेश एक छुट्टी सजावट प्रभाव बेलुन मदत गर्नेछ सिर्जना गर्नुहोस्, र।
एउटा सुन्दर पोखरी मा rotunda र झरना को एक भव्य दृश्य प्रदान गर्दछ जो एक विशाल 70 मान्छे को लागि, पाल स्थित। भूदृश्य मैदान परिवार उत्सव स्मरणीय र रोमान्टिक दिन्छ।
होटल "नोबल नेस्ट" (Korolev), बुकिंग जब हामी बिर्सनु हुँदैन जो केही अवस्था, त्यहाँ हो:
बच्चाहरु तीन वर्ष नि: शुल्क अन्तर्गत (कोठा मा एक खाट छ);
12:00 मा 14:00, प्रस्थान मा जाँच;
क्रेडिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब, भिषा, Maestro र मास्टरकार्ड भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ;
पाल्तु जनावर संग बसोबास देखि निषेधित;
नाश्ता कोठा को दर मा समावेश।
रानी मा रेस्टुरेन्ट "नोबल नेस्ट"
होटल मा रहन को जाडो बगैचा मार्फत रेस्टुरेन्ट मा प्राप्त गर्न सक्छन्। अन्य ग्राहकहरु लागि छुट्टै प्रवेश। रेस्टुरेन्ट को मुख्य हल दोस्रो तल्ला मा स्थित छ र 50 मान्छे सम्म समायोजित गर्न सक्छन्। आवश्यक छ भने, तपाईं को व्यवस्था गर्न सकिन्छ बुफे तालिका 80 व्यक्तिका लागि।
मेनुमा मुख्य रूप लोकप्रिय रूसी व्यञ्जनहरु मा युरोपेली व्यञ्जन र भेरिएसनहरूमा प्रतिनिधित्व छन्। होटल अतिथि आनंद से को शानदार रेस्टुरेन्ट भान्सा गरेर हैरानी हुनेछ।
भोज हल छुट्टै प्रवेश, प्रवेश नै समय मा जहाँ समायोजित गर्न सक्छन् 20 कार कार र पार्किंग को उपस्थिति, खुसी छ। को कारण हल को स्थान धेरै राम्रो तरिकाले चुनिएको, को मनोरम Windows आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्ताव। होटल जटिल कर्मचारी विवाह पार्टी र अन्य परिवार उत्सव आयोजना मदत गर्न खुसी हुनेछन्।
होटल "नोबल नेस्ट" (Korolev) मा banquets लागि हल भाडा को लागत चरण, को प्रोजेक्टर र उपलब्ध उपकरण प्रयोग समावेश छ।
Muscovites - रेस्टुरा, "Gentry" मा बारम्बार भाडामा लिनेहरूको भोज कोठा। Korolev - तपाईं भारी दैनिक काम बारे भूल र यो Mytischi, Sergiyev Posad, Ivanteevka, Shchelkovo र Pushkino टाढा छैन बाहेक, संसारको सौन्दर्य आनन्द उठाउन सक्छौं जहाँ एक ठाउँ। त्यसैले राजधानी को बासिन्दा अक्सर यहाँ छन्।
होटल "नोबल नेस्ट" (Korolev): अतिथि समीक्षा
विभिन्न vacationers देखि छाप। unequivocally लगभग सबै मनपराएका कि मात्र कुरा - एक सुन्दर क्षेत्र। र अझै, गरेको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू तल्लीन गरौं।
होटल को लाभ रूपमा "नोबल नेस्ट" (Korolev) पर्यटकहरू ध्यान दिनुहोस्:
उत्सव को उत्कृष्ट संगठन;
राम्रो सेवा (हुनत त्यहाँ केही र नकारात्मक प्रतिक्रिया, तर यस्तो अल्पसंख्यक छन्);
ठूलो संगीत र वातावरण।
तर खराब वातानुकूलन र खराब मौसम अवस्थामा पाल मा आराम असुविधाको भविष्यमा यो ठाउँ भ्रमण गर्न केही क्षमा गर्नुहोस दिनुहोस्। तर, यो यस्तो प्रतिक्रियाहरू दुर्लभ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
फोन नम्बर ठेगाना, समीक्षा: Novy Urengoy होटल
केन्द्रीय पटाया मा होटल के हो, यो चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ?
होटल Sunwing Waterworld Makadi (मिश्र / Hurghada): एक विस्तृत विवरण र विशेषताहरु
"Waikiki": मास्को मा पसलहरूमा को ठेगाना र माल को सीमा
Nettles। बाल्न र यसको उपचार